मेरो मातृभूमि र नेपाली युवा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / मेरो मातृभूमि र नेपाली युवा
मेरो मातृभूमि र नेपाली युवा
Posted by: युगबोध in विचार April 9, 2019	0 51 Views
मेरो प्राण भन्दा प्यारी, मेरी मातृभूमि बेग्लै आनन्द छ तिमीस“ग रमाउनुको, मेरी साथी हौ तिमी, जीवनभरिकी साथी। के दिएकी छैनौ र मलाई ? सबथोक पाएकी छु मैले तिमीबाट। यो बाल्यकालको उत्तराद्र्धमा आइसक्दासम्म लिइरहें मात्रै तिमीबाट । तर दुःख लाग्छ केही दिन सकिन तिमीलाई। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएकी तिमीस“ग व्यापक सम्बन्ध जोड्न मन छ। कहिल्यै नछुट्ने अनि कहिल्यै नटुट्ने सम्बन्ध, र सधै रहिरहने सम्बन्ध। राम्रा र नराम्रा विभिन्न धेरै मान्छेहरुको सम्बन्ध भन्दा असल एउटै मात्र तिमीस“गको सम्बन्ध प्यारो लाग्छ मलाई, म तिमीस“ग रमाउन सक्छु। तिम्रो यो निश्छल मन र चोखो माया प्यारो लाग्छ मलाई।
तर हेर त बेरोजगार नेपाली युवाको यो दर्दनाक अवस्था। प्रत्येक दिन लामबद्ध छन् विदेशिइरहेका छन्। नेपालमा छन् त केवल बृद्धबृद्धा र बालबालिका मात्रै। ऋण गरेर विदेशमा गइ रगत र पसिनास“ग पैसा साट्ने युवाको कथा सुन्दा तिमीलाई पीडा हुन सक्छ । तर मातृभूमि यस्तै छ यतिबेला मेरो देशको वास्तविकता। मैले रोक्न त खोजेकै हु“ तर सकिन रोक्न मेरा गाउ“का दाइ र बुवाको विदेश यात्रा। के गर्नु यस्तै छ विवशता भन्दै भक्कानिन्छिन् गाउ“मा मेरी आमा अनि भाउजू। म सम्झाउनै सक्दिन“। एउटा सानो मुलाको बीउ जब धर्तीको माटोेमा पस्छ उम्रिएर विशाल आकार लिन्छ।
पढाइको नाममा धेरै पैसा खर्च गरेर रोजगार नपाएर विदेशतिर नै होमिने युवाको कमी छैन नेपालमा। दिनप्रतिदिन झन भन्दा झन् विकराल समस्याले अस्तव्यस्त बन्दैछौं हामी। संसार एक्काइसौं शताब्दीमा पुगिसक्यो तर पनि यहा“ उस्तै छ अवस्था शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बेरोजगार। समाजमा उस्तै देख्छु म अन्योलता र अराजकता।
नेपाली युवाहरुको विदेशी यात्रास“गै नेपालको यो खेतीयोग्य जमिन, पानी र यहा“को सबथोक हराइरहेछ। यति मात्रै होइन, नेपाली युवाको यो विदेशको यात्रास“गै यहा“को अथाहा प्राकृतिक सुन्दरता, सयौं भाषा, सयौं जाति, सयौं संस्कृति र सयौं परम्पराले सुसञ्जित यो नेपाल नै हराइरहेछ। थुप्रै सम्भावना बोकेका युवाहरु स“गस“गै यी चहकिला हिमालहरु मधुरा भइसके। पहाडहरु होचा भइसके। तराईको त्यो खेतीयोग्य जमिन हराइरहेछ। अनौठो तरिकाले परिवर्तन भइरहेको छ नेपाल। राम्रो सुन्दर भविष्य बनाउन चाहने युवाहरु मात्रै गएका हुन् सुन्दर भविष्यको खोजीमा विदेश। त्यो भन्दा बढी युवाहरु त नेपालभित्रै झुलिरहेका छन् फेसबुकमा, युट्युवमा र ट्वीटरमा। इन्टरनेटमै पनि राम्रा कामहरु गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन । तर कहा“ झुलिरहेका छन् अहिलेका युवाहरु जुन यतिबेला ब्याख्या नै गर्न सकिदैन।
अनेक दलालले सेवक बनेर सोझा सिधा जनतालाई दिनप्रतिदिन फसाइरहेका छन्। थुप्रै सुनौला सपना, मीठा–मीठा सपना विकट गाउ“का सोझा जनतालाई कसरी पत्यार नलाग्दैन ? यतिबेला त धेरै नेपालीको आवश्यकता, एक अनुकूलता र एक मौलिकता हुन खोजिरहेको छ। इच्छा र आकांक्षा, सपना र कल्पना बन्न खोजिरहेको
छ। म त डराइरहेछु के भइरहेछ यो नेपालमा । यहा“ जे भइरहेको छ सबै नराम्रो नै भइरहेको छ। तर यस्तै भयो भने हाम्रो नेपालको सारा इतिहास हराएर जानेछ।
प्यारी मातृभूमि † यो सुन्दा तिमीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। नेपालका केही युवाहरुले त आफ्नो योग्यता र क्षमता भएर पनि रोजगार पाउनै सकेका छैनन्। देशमा त केवल ठूला–ठालुहरुकै हालीमुहाली छ। गर्नेहरुले मस्ती गरिरहेकै छन्। यहा“ छ त केवल शासकहरुकै छ शोषण। हामी जस्ता गरिब दुःखीहरुका लागि त उस्तै हो लोकतन्त्र, उस्तै हो गणतन्त्र। हुनेहरुको लागि भए विभिन्न प्रकारका तन्त्रका स्थापना । तर दबिएर बसेका यी नेपाली नागरिकको लागि कहिल्यै कुनै तन्त्रले प्रभाव पारेको छैन।
रगत र पसिनास“ग पैसा साट्ने नेपाली युवाहरुलाई अब नेपालमै मेहनत गर्न सिकाउनुपर्छ। हामी त रातो र तातो रगत भएका युवालाई राज्यले केही दिएन । देशमा अवसर छैन । उद्यम छैन भनेर पछुताउनु भन्दा अब नया सोच, विचार र नया जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपाली माटोमै रगत र पसिना बगाए के सम्भव छैन ? सबथोक छ । अब निराशाको पर्खाल हटाएर मेहनतको थालनी गरौं। सबथोक छ हामीस“ग। यदि हामीले यो नेपाललाई माया गरेनांै भने यहा“को यो खेतीयोग्य जमिनले धिक्कार्नेछ हामीलाई। हाम्रो कुनै अस्तित्व रहने छैन।
Previous: देउखुरी क्याम्पसमा सर्वसम्मत नेतृत्व
Next: कुराकानीलाई विश्वासयोग्य बनाउन ‘स्पेश’ सूत्र